Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpanao Gazety: Nodimandry ny namana Joe Miandrisoa
Nodimandry tamin’ny zoma faha 15 jona 2018 ny namana mpanao gazety Joe Miandrisoa, izay mpanao gazety ao amin’ny RNM na ny Radio Nasionaly Malagasy.
Isan’ireo mpanao gazety feno tanteraka i Joe Miandrisoa. Niavaka tamin’ny feony avo sy mikarantsana ary mazava izy. Ny taona 1992 no niditra tao amin’ny sehatrin’ny asa fanaovan-gazety i Joe Miandrisoa tao amin’ny Radio Tsioka Vao (RTV). I Mbony Christian Miandrisoa no tena anarany ka ny asa fanaovan-gazety tao amin’ity orin’asa RTV ity no nitondrany io anarana Joe Miandrisoa io.
Raha ho tsiahivina ny fotoana niarahana tamin’i Joe Miandrisoa dia mpanao gazety nitazona ny fenitrin’ny asa fanaovan-gazety tanteraka izy. Vitany an-tsakany sy an-davany ny fifehezana ity asa ity ary isan’ireo môdely tamin’ny fanarahana izany izy. Tsy nianatra nanao gazety izy fa ny tantara sy jeografia no fianarana nataony teny amin’ny oniversite Antananarivo. Nanao fikarohana mahakasika ity asa ity izy ary nampianan-tena noho ny fiatiavany izany.
Tanterany tokoa ny zavatra niriany satria dia isan’ireo mpanao gazety lehibe teto amin’ny firenena izy. Nanentana ny fandaharana Savaravina tao amin’ny RNM sy TVM izy ary ny fandaharana Masoroa, izay mikasika ny raharaha politika sy sosialy ary ara-toekarena. Tany amin’ny Radio Tsioka Vao dia isan’ireo nanana toerana lehibe tao amin’ny filazam-baovao tamin’izany andro izany. Very olomanga ny asa fanaovan-gazety amin’izao fahalasanany izao.
Androany alatsinainy faha 18 jona 2018 no ho entina any Bezaha Betioky ny vatana mangatsiakan’i Joe Miandrisoa. Mandria am-piandanana!
Ny mpiasan’i La Gazette de la Grande Ile sy ny mpiara-miasa aminy tao amin’ny Radio Tsioka vao rehetra dia miombona alahelo tanteraka amin’ny fianakaviany.